ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စားဖားကြီးများ သတိထား
Very good post!really.
ညီညွတ်ရေးဆိုလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောတဲ့ ရီစရာလေး သတိရတယ်။
'ညီညွတ်မယ်လေ ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ပေးမလဲ' တဲ့။ :P
ဒီတခါတော့ ကိုပေါကို အမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်ပြီ.
အစစ်အမှန်နဲ့ အတုအယောင် ခွဲခြားစိစစ် သွား နိုင် ပါ စေ.
အရင်တုန်းက ဝေးဝေးနေတာလည်း ညီညွတ်ရေးလုပ်တာပါ။ အန်တီစုအကျယ်ချုပ်ကျနေတာ ကြောက်၊ အဲလေ၊ ကြည့်ပြီး ညီညွတ်ရေးသဘောနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့တာ။ အေးအတူ ပူရင်အမျှဝေပေါ့။
- တာကူးအဖွဲ့ (တလွဲမထင်နဲ့နော်။ အတာကူးမှာဖွဲ့ထားလို့ပါ။)
ကျွန်မအပြည်.အ၀ထောက်ခံပါတယ်၊ ဥပမာ တစ်ခုပြော၇မယ်ဆို၇င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျနေတုန်းကဆို၇င် ဖမ်းခံ၇မှာစိုးကြတော. အဖွဲ.ချုပ်ဆို သွားမယ်.သူတောင်မရှိဘူး၊ လမ်းထဲက ကလေးတစ်ယောက်ဆို အဲဒီအချိန်တုန်းက ဖမ်းမှာကို ဂရုမစိုက်ဘူး အဖွဲ.ချုပ်ပွဲရှိတိုင်းသွားလို. သူ.ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ခနခန တွေ.၇တယ်၊ အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း လွတ်လာေ၇ာ အဲဒီခလေးမှာနေစ၇ာအပေးမခံရဘူးနဲ.တူတယ် မတွေ.တော.ဘူး၊ ဘူးသီးသီးမှအရီးတော်မယ်.သူတွေ၊စားဖားကြီးတွေများလို.လေ။
အကူအညီလိုအပ်နေသေးတဲ့နေရာမှာ ကူညီချင်ရင် ဘယ်အချိန်မဆို ကူညီ ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
အခွင့်အရေးနဲ့နေရာအတွက်ကတော့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုချိန်အထိ ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေသူထက်စာရင် ကူညီချင်သူက အများကြီးသာပါတယ်။
"အေးအတူ ပူရင်အမျှဝေ" တဲ့လား..အဆိုလေး သဘောကျတယ်း)
Oh! Mdm Paw! Ko Paw is astute and corpulent friend. Hummm Mdm Paw likes to launchadiatribe against J Moe always. Now J Moe is giggle & elated Ko Paw's blunt post.
ခါနီးချိန်မှာ ပိုပြီး သူရို့တွေ လှုပ်ရှားကြသလားလို့..။
(ဒီလိုဆိုတော့လဲ ကျွန်တော်တို့ပြည်ကြီး ခေတ်တခုပြောင်း
I think one of the strengths
of General Aung San was that
he could lead people who were
more educated and experienced
than him and because he did
not say that you were studying
in UK while we were boycotting
the unfair university act.
U Tin Htut was University of
Cambridge educated, Barrister
at Law from an London inn and
he was an ICS. But he was a
patriotic and Gen. Aung San
saw that he was serving their
shared country in different
way. U Ohn Maung was an ICS
(Indian Civil Service) or
BCS (Burman Civil Service)
and he was one of the nine
martyrs. The problem was
that after the independence,
lesser educated communists
and communist symphatizers
did an ugly act of demonising
those who work with British
while praising the partisans.
If Daw Su would work with USDA
and generals and if she could
inspire their young guys then
we can gain. Some of them may
admire Daw Su too. And I don't
think that there should be a
reward system for whom were at
the party's meetings. That was
why Trishaw masters thought that
they have rights for rewards.
I once supervisedafew masons
whose father was the NLD party' secretary in Tharketa and those
chaps married to the helper girls
who were YeMays from 3rd Burman Rifles. So for them, they don't
care, as long as the country become
rich, more jobs for them, it is good for them. For their father,
I do not think he is qualified to
be Daw Su's advisor even if that
chap may have been cleaning Daw Su's compound for 100 years. It is to do with competence, commitment helps but it is not the only attributealeader is seeking
in her (Daw Su's) followers.
The more people come and help her,
the harder for hard liners in Tat to move against those. If 100 of them come to Daw Su and work for her, then some jerks can lock
them, but they cannot do if there will be 100,000. I doubt your wisdom indeed.
"အေးအတူ ပူရင်အမျှဝေ" တဲ့အဆိုလေးကိုနဲနဲပြင်မယ်
" အေးအတူ ပူရင်မျှဝေ " ကဲပြင်လိုက်ပြီဗျာ-
Ko Paw please reply otherwise your self-claimed "democratic protester volunteer organizer" title will be lost.
Here comes another dick head!!
'O' is playing the role of POTUS
withateleprompter, that means,
he delivers excellent orations
reading the scripts written by
a team speech writers. When the device has technical hickups, he gets f..k ups.
BTW, you are wrong even after
repeated attempt. You should
have written as follows -
He should have said "Instead
of punishing failure, we are rewarding. Instead of funding
the status quo, we invest only
If you write in English, then
communicate clearly. I do not
mind you write in Burmese if
Butacrap isacrap no matter
who says it even if it came
out from your stinky mother.
Haveanice day Sir! See how polite? Learn it dude!
It looks like this Anonymous use Spelling Check carefully before he post?
By the way Myanmar people use Myanmar to refer their language(not burmese)
Myanmar people seldom use Sir/dude...whatever in shakespeare or other classic novels.
May be the guy is smarter than you?
ဖြေရှင်းမနေပါနဲ့ .. ဗမာလို မရိုက်တတ်တဲ့ မျိုးချစ်နိုင်ငံသားကြီး အရှက်ပြေ သူ့ အင်္ဂလိပ်အမှား လာထပ်ရှင်းနဲ့ ထပ်မွှား(မှား)သွားတာပါ။ ဗမာလို လက်ကွက်လေး ကျင့်ပြီးပြန်လာခဲ့နော်
Hello Anonymous with F..k..g good English ,
Please let your Myanmar friend translate below post by Myanmar Language to understand what does it mean?It's byaMyanmar citizen
ပို.စ်နဲ.မဆိုင်တာတွေလျောက်ရေးနေတာ ဗွေမယူပဲ အရင်က ကိုပေါရဲ့ ပို.စ်အဟောင်း ကို ကြေငြာဝင်တယ်လို.ပဲ သဘောထားပြီး အိမ်ရှင်ကိုပေါကလည်း ခွင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည်
How's it traitor Ko Paw & associates?
Are you really doing for Myanmar?
'O' is playing the role of POTUS....
Hi friend (refer to above anonymous ) , how about your current position in your carrer ? Why do you comment on others by this way? Are you very smart and get wealth in your life ? We are fighting for language ? How about Japanese, Chinese ,French & etc.,,,those very bad in English but they are doing business around the world . OK ??? T4,SPDC generals are promote day by day during nonsense fightings of chicks .LOL ....:P:) ^_^
U Than Shwe may don't know English and technogical things but he knows very well about Myanmars & world's polictics .Language is impotant or what we can perform is important ? Please clarify to achieve in your life .I found those kind of people are workers of corporate as English translators for those people don't know English but have money .OK ???? U got it ??? We just see who is achiever or non-achiever . Meow .....
What made you think that native English speakers could read and
write better English than us?
It is justamatter of practice!
I have nothing against your PC
(Patriotic Citizen), I was just
browsing blogs and killing time.
I think my Burmese might still
be better than yours if I bother to type in Burmese fonts.
E ပေါက်ရင်ကြည့်ပေါက် said...
ဲအဲဒီ မျိုးချစ်ကြီးနဲ့ so-called သူ့ဘက်တော်သား (သို့မဟုတ် သူကိုယ်တိုင်တောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ) က အခုထိ ကကြိုးကကြောင် E တွေပေါက်ပြီး မဆိုင်တာတွေလျှောက်ပြောနေပြန်ပလား။ အပေါ်က အမည်မသိ November 20, 2010 9:02 PM ခင်ဗျားက မျိုးချစ်ကြီးကို E ပုတ်ပေါက်လို့ ၀ိုင်းတီးတာကို နာတယ်။ အဲဒီမျိုးချစ်ကြီးက သူ့ E ကပဲ မွှေးသလိုလို ဒီကလူတွေ (သူနဲ့ငြင်းသူတွေ) ကပဲ သူ့လို မရေးတတ်သလို၊ အင်တာနေရှင်နယ် မဟုတ်သလိုလိုနဲ့ စော်ကားတာကို မမြင်တာလား၊ (ဒါမဟုတ် မသိဟန်ဆောင်တာလားလား၊ အဲဒီ မျိုးချစ်ကြီး ကိုယ်တိုင်မို့လားတော့ မသိဘူး)
E ပေါက်ချင်ရင် ကောင်းကောင်းပေါက်။ ကောင်းကောင်း မပေါက်တတ်ရင်လဲ သူများအပေါ် ဆရာကြီးလေသံမလုပ်နဲ့။ ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာအပေါ် သဘောမတူရင်လဲ ခင်ဗျားကို ၀ိုင်းဖဲ့စရာမလိုဘူး။ ခင်ဗျားဖက်ကသာ အစွန်းမထွက်ရင်ပေါ့။ ကိုယ့်ဖာသာ စိတ်ကြိုက် ဗိုလ်သန်းရွှေကို ကြည်ညိုလေးစားနေလို့ရတယ်။ ကိုယ့်လူ E လောက်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေ မပေါက်တတ်သလိုတော့ ငမြောက်ငခြောက် မလုပ်နဲ့။ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ဘိုစစ်စစ်လောက် နံအောင်ပေါက်တတ်သူတွေလဲရှိတယ်
Some people learn and impress Language to show off in front of other people like the Anonymous of(Learn it Dude!)we don't need to practicealanguage to become master but to communicate well is enough.
If you never trained your kids to work hard and smart but only trained excellent English one day they will feed you by working at Pubs or suc.... bosses' d... he..?
OK?make sure they will not take care you by this way?Focus on work,not onaflexible tounge how to twist fast?
We really suspects of this blog's owners and behind scene.Be careful..
မပးပါနဲ့ ဘယ်သူမှ မပေါင်းလိုပါဘူး။ အင်ဂျီအိုလုပ်စားချင်တဲ့လူတွေကလွဲရင်ပေါ့။
နိုင်ငံရေးကတော့ နိုဘယ်တွေအိုပယ်ဖြစ်ကုန်ပါပြီခင် ဗျား။
Your opinion is good.But we need forces(also myanmar soldiers)on the way of Democracy.If Mother Su is join them please don't angry.If we have Human rights, we can choice.
I am discuss only.Not teaching.Don't angry Kopaw.We are brothers for Myanmar.
I agree eventhough nobody accept
GOOD . How u get such kind of excellent idea.
Ko Paw! you are no.1 in Singapore
E ပေါက်ရင် သိပ်လေမကျယ်နဲ့ said...
At last, is flooding with copy and paste messages the only sort of mean you stick to when you ended up being humiliated for your silly comments and awesome English? Shame on you!
That's why we called them Demo Nga Tones???
Easy to distract from democracy,now become language comments post???ha ha hah.....
Demo Nga Tones Bo Lann Nee...he he
Ko Paw & ASSOCIATES
ASK YOUR NON-MYANMAR FRIEND TO KEEP WRITE FUC.... GOOD ENGLISH LANGUAGE TO COMMENT GRAMMAR
YOU ARE SUPPORTED BY ....
ALL READERS BE CAREFUL
Hello Dick Head!
You trying to teach OBAMA correct English?
Your mother will like your d... head?
read below link and say Sorry to respective person?
ခင်ဗျား ဘလော့အပေါ်ဆုံးမှာ တင်ထားတဲ့ ရေဒီယိုက ငနဲတွေက အဆိုးဆုံး..
သူခိုးကြမ်းပိုး ကိုယ့်မယားမရှောင် သူ့လင်မရှောင်တွေချည်းပဲစုနေတာဗျို့..
ဒေါ်စုမလွတ်ခင် မီဒီယာဘက်မလိုက်ဘူးကွဆိုပြီး ၂၀၁၀ေ၇ွးကောက်ပွဲ ထောက်ခံပါတယ်ဗျို့ဆိုတာချည်းပဲ။
လူတွေစုတ်ပြတ်နေချိန်မှာ ကားကောင်းတွေစီး။သုံးဖြုံးသောက်စား။ခေါင်ကအစ ပြာတာအဆုံး။
POTUS 'O' is just another dude.
Is he powerful? Yes!
Is he essential like our Daw Su
for Burma and Burmese? No!
When 'O' goes, there will be another dude or dud will fill
in his role! When Daw Su goes,
I will not even browse Burmese
web sites as no hope for Burma.
I have left rotten land already
and the only thing between me
and that rotten land is her.
Not dick heads either male or
Dick heads seem love to suck and
they are on both sides: hardline
general's side and opposition.
Dick heads who support former
say bad things to Daw Su for
crimes she never committed
while dick headed activists
and exiles will cry watching
speech ofahot chic in YouTube.
But I tell you what, you are not
alone,asucker is born every minute and dickheads are norm
and not exceptions. So you are
in good company and I really do
appreciate your entertainment!
Without your ingenuity of fools,
my days will be boring whenever
I need low budget entertainment.
အရှုးက ဘာတွေ လာကူညီခိုင်းနေသလဲ။
ဒီပိုစ့်မှာ အရှုး လာမအော်တော့ဘူးဆိုပြီး ခဏခဏ ၀င်ချောင်း စိတ်ချမ်းသာနေတာ။
လာပီး ချေးပန်းသွားသေးတယ်း)
ကျုပ်က သိပ်တုံး.. သိပ်အပြီး ပြောတိုင်းယုံပြီး ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေကို နည်းနည်းမှ ကြည့်လို့မရပါဘူး။ မငယ်နိုင် ဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ မြန်မာတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ??? ဆောင်းပါးမှာ .. ဒီမိုငတုံးတွေကို ထုနှက်ထားတာပါ။ ဟဲဟဲ.. ဒီမိုငတုံးများ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဟားဟား။ ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက် တစ်ခုကို မေ့နေတယ်။ မြန်မာ ဒီမိုတွေက သိပ်တုံး.. သိပ်အ ပြီး စာအုပ်ထဲရေးထားသမျှ ယုံတယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက ပြောသမျှ အားလုံး ယုံတယ်။ အဖြူကြီးတွေက စကားလုံးလှလှလေးတွေ ပြောတိုင်းယုံတဲ့ .. ငတုံး .. ငအ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ထည့်ပြောဖို့လိုသေးတယ်။
အပေါစားနိုင်ငံရေးစာအုပ်ထူထူကြီးတွေမှာ ဘာသာတိုင်းဟာ ကောင်းတာပဲ သင်ပေးတယ်ရေးထားတော့ ဒီမိုငတုံးတွေက ယုံကြတယ်။ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ကြံဖန်ပြီး အကောင်းမြင်ပေးနေကြတယ်၊ မိုဟာမက်ဟာ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီဆိုတာ သူတို့ Quran ကျမ်းထဲမှာ အတိအကျကို ရေးထားတာနေ။ အဲဒါကို ဒီမိုငတုံးတွေက မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ မိုဟာမက်တန်းတူထားပြီး ပြောဆိုနေကြတယ်။ အဲလောက်တုံးကြတာ။
အရင်တုံးကဆိုရင် Global warming နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရေးနေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာလို့ ရေတွေလွှမ်းတော့မယ်။ မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်တော့မယ်. . ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ဒီမိုငတုံးတွေက ယုံကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းဖို့ လိုတယ်ဆိုပြီး ပြောကြသေးတယ်။ ၀ါးဟားဟား . . . တုံးလိုက်တဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေ။ အခုကျတော့ အဲဒီသတင်းတွေ ဒီမိုမီဒီယာတွေက လုံးဝ မရေးတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်မရေးတော့တာလဲဆိုတာကို မလေ့လာကြဘူးလေ။ ကြောက်အောင် ဖြဲချောက်တုံးက ကြောက်ဒူးတုံပြီး.. ပြီးတော့လဲ Global warming မေ့လိုက်တာ… ဒီမိုငတုံးတွေပါ။
"ဘယ်လောက်ပဲ ဥာဏ်ပညာကြီးပါစေ။ ဘုရားသားတော်တွေ အထက်မှာ နေထိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။"
I do not see General Aung San
or Daw Su on higher grounds while monks at lower grounds. On the HTML page, the web page, perhaps,
even so it is justasequence and
you as Alex Jone's sucker might
find it odd but me asaBuddhist
find it perfectly normal.
I think you were lucky to be born asaBuddhist, Buddhism is about
moderation and consideration. Guys like you, if were born asaChristian or Muslim, you might have
becomeafanatic accusing others are infidels. We know there were religious wars, we know there were forced conversions, we know there are rogue religious separatists and some territory thieves with demography (swamping with greater birth rates or migration). But
it does not mean that they should not have their rights to worship what they want. You can fight them if someone force to convert you by strength or stealth, you can be on alert all the times to watch out those who will try to change your way of life. But you do not change
their ways of life unless it is on
conflict path with common values.
Daw Su is very religious and
devout Buddhist. She can discuss Buddhism better than your sugar daddy generals.
Can you please go and s..k Alex Jone's dirty thingy and stay quiet?
ကနေဒါက မူဆလိမ်ခွေးရူး ချီးလာပါတာ တတ်မနင်းကြပါနဲ့ ...
(Daw Su is very religious and devout Buddhist. She can discuss Buddhism better than your sugar daddy generals.)
၀ါးဟားဟား.. မင်းတို့ ဒီမိုတွေ အဲလောက်တုံးတာ တကယ်ရယ်ချင်တယ်။ ဦးသန်းရွှေကို စစ်သားတွေ မျက်ကန်း လေးစားတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုဆိုးတဲ့ကောင်တွေပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုပဲ။ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုတာ ဘာကို ကြည့်ပြီးပြောတာလဲ? သာမညဆရာတော်ကြီးဘေးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခံတာနဲ့ မင်းတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဖြစ်ရောလား? နိုင်ငံရေးသမားပီပီ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တာ မသိရင်ခက်မယ်။ (ဟိုတနေ့က ဧရာဝတီ အင်တာဗျူးမှာ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၂ခုကို လိမ်ညာပြီး မဲဆွယ်သွားတဲ့ အပေါစားလုပ်ရပ်လဲ သတိထားမိရဲ့လား? )
ကဲကွာ ဒါဆိုရင်… မင်းတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာသာရေး ရိုသေတဲ့သူဆိုတာ့ မေးကြည့်မယ်လေ။ ၈၈ မတိုင်မီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘုန်းကြီးတွေကို လှူဒါန်းနေတဲ့ပုံ.. ကန်တော့နေတဲ့ ပုံလေးတစ်ခုလောက် ပြစမ်းပါ။ မြန်မာပြည်အလည်လာတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်ဖူးတဲ့ ပုံလေး တစ်ပုံလောက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ မနေ့တနေ့က လူကြီးတွေကို ကန်တော့နေသလိုမျိုး ၈၈ မတိုင်မီက ကန်တော့ခဲ့ဘူးလား? ငါတွေ့ဖူးတဲ့ပုံကတော့ ဒူးပေါ် ပေါင်ပေါ်နဲ့ ဘေးကလူက .. . တဏှာထအောင် ဖြဲဖြဲကားကားနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံပဲ မြင်ပါတယ်။ ၀ါးဟားဟား.. ဆောရီး.. အဖွားကြီးက ၈၈ ရှေ့ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်တာ။ နိုင်ငံရေးလုပ်လာခဲ့သလို. .. အခြေအနေအရ ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်လာတဲ့သူကိုး။ ငယ်ငယ်တုံးက ဘုရားဖူးနေတဲ့ပုံက ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲ.. မရှိတာကြီးကို တောင်းတော့ ခက်ပြီပေါ့ :P ဟိဟိ.. အရှက်ခွဲသလို လုပ်မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူကို ဗုဒ္ဓဘာသာရိုသေသူအဖြစ်ပြောနေ၍ ဟားတိုက်နေသည့်
( ကနေဒါက မူဆလိမ်ခွေးရူး ချီးလာပါတာ တတ်မနင်းကြပါနဲ့ ... )
မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေက ဦးဏှောက်က လုံးဝ မရှိ။ ဒီမိုမီဒီယာတွေ ပြောသမျှ အမှန်လို့ထင်။ စာအုပ်ထူထူကြီးထဲမှာ ရေးသမျှ အဟုတ်ထင်။ လိမ်သမျှ အကုန်ယုံ… တကယ့်ကို တုံးလွန်း .. အလွန်းတဲ့ ကောင်တွေပဲ။ စကားပြောရင်လဲ လူလိုမပြောတတ်ကြဘူး.. ဆဲပဲဆဲတတ်တယ်။
ဟေ့ကောင် ဒီမိုငတုံး . . . မဆဲနဲ့ကွာ။ ဒီမိုဘလော့တွေက . . . မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေ အောက်တန်းစားပီပီ ဆဲတာကို.. လက်ညှိးထိုးပြီး. . . . မြန်မာတွေက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်နဲ့ မတန်ဘူးလို့ ပြောကြတယ်ကွာ။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ သူတို့ ဒီမိုဘလော့တွေက ကော်မန့်နဲ့ ဆီပုံးတွေမှာ လွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူး။ အမှန်တရားပြောပြမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဦးသန်းရွှေဟာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ပြောဆိုခွင့်ရဲ့ ဖခင်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဦးသန်းရွှေ ကျေးဇူးကြောင့်သာ ဘလော့လောကကြီးက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရနေတာ။ သူ့ကို နှပြားမတန်အောင် ဆဲတာတွေ။ သတ်မယ်ဖြတ်မယ် ပြောတာတွေ အားလုံးကို သည်းခံပြီး.. လွတ်လပ်စွာ ပြေဆိုခွင့်ပေးတယ်ဗျာ။ အင်မတန် စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ ဦးသန်းရွေပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… မဆဲပါနဲ့နော်။ ဒီမိုဘလော့တွေက မင်းတို့ကို လက်ညိုးထိုးပြီး မြန်မာတွေကို အထင်သေးတဲ့ စကားပြောတာ မခံချင်လို့ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်။
လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြောဆိုခွင့်၏ ဖခင်ဖြစ် ဦးသန်းရွှေကို အလေးပြုနေတဲ့
မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေက တကယ်ကို ဦးဏှောက်က လုံးဝ မရှိ။ စောက်ဆင့်ကလဲ လုံးဝမရှိဘူး။ နအဖကိုကျတော့ ချေးယိုသေးပေါက် မကျန် စောက်တင်းထိုင်ပြောကြတယ်။ နအဖကိုတော့ အားလုံး ပြုပြင်ပြီး သူတော်ကောင်းလို လုပ်ကိုင်စေချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။
ဟေ့ကောင်. . သူ့ယောကျား ပါဠိလို တတ်တာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာများ ဂုဏ်တက်မှာလဲ? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုရင် ၈၈ မတိုင်မီက မြန်မာပြည်ကို အလည်လာတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို တက်ဖူးတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံလောက် ပြနိုင်ရမှာပေါ့။ ၈၈ မတိုင်မီက ဘုန်းကြီးတွေကို လှူဒါန်းနေတဲ့ ပုံလေးတော့ ပြသနိုင်ရမှာပေါ့။ ဘာမှ မပြသထားဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာဆန်တယ်.. ဘာသာရေးကို ရိုသေသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောသံပဲကြားတာနဲ့ အကုန်ယုံတယ်။
ကြည့်ရတာ မင်းတို့ အမေစု. . . သမတ္တဖြစ်လေမလားဆိုပြီး သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံယှဉ်ပြီး ရိုက်တယ်။ အဲဒါကြည့်ပြီး အမေစု ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုတာထင်ပါ့။ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံယှဉ်ရိုက်တာနဲ့ အဲလိုထင်တယ်ပေါ့? မင်းတို့ ဒီမိုတွေကတော့ .. ထို၍ .. ထိုမျှ .. တုံးလွန်း.. အလွန်း.. ဧရာမအတုံးကြီးများဖြစ်ပေ၏။ ၀ါးဟားဟား
မင်းအဖေက ဦးသန်းရွှေတဲ့လား ??????
Do not step on mad dog's shit.
If you step on it, he will never be end barking around.
ကိုပေါ... အီးမေးလ် ပို့ထားတယ်။ ဘယ်သူ့ ဆက်သွယ်ရမှန်း မသိလို့။ ကိုပေါပဲ သတိရတယ်။
ခွေးသား ၀က်မြေး ကြက်ယောက်ဖ ဇော်မျိူး ကို လားပင်စင် ပေးသင်.ပြီ
ကိုပေါ အဲဒီ ခွေး ကို ဘန်းလိုက်ပါတော.
Check PayPhooHlwar magazine 1986 issues. Her son went into novicehood
(junior monkhood) inaBuddhist monastery in Yangon.
ko paw, i saw you commnet in other's blog. never go back to myanmar about six years?
you should go back and see your lovely mother land. don't love from away always. some will wait for you to treat well too. be brave!
ko paw, i saw you comment in other's blog. never go back to myanmar about six years?
NLD is sending the right signals and
so did from regime. Next step is to
have national reconciliation! I am
feeling great and brimming with
hope for my country these days.
အမည်မသိ November 24, 2010 8:48 PM သို.
ခင်ဗျား ကိုပေါကိုမေးကြည့်ပါ ၊ သူတကယ်လို. မြန်မာပြည်ကို ပြန်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လက်မှတ် (SIN-YGN)one way လက်မှတ် တစ်စောင်ဝယ်ပေးမယ် ၊ two way ticket တော့ မ၀ယ်ပေးပါရစေနဲ. ၊ အပြန်လက်မှတ် အဆုံးမခံနိုင်လို.ပါ ၊
I respectaforeigner like Dr. Michael Aris thanasucker like
you who is attacking Daw Su for
her private life. She wasafree woman. She could marry whoever
she wanted. That is none of your
fucking business. If he happened to beascholar whose citizenship is British and ethnic race is white. Where is the problem?
I do not see any problem in it!
Let me tell you something! British
as colonizers did bad things for us
but there were good Englishman, and
Scots and Irish who did good things
Ever heard of Fernival book club?
Burmese youth were exposed to new
ideologies: political science, economics, socialism, communism, nationalism because of that book club.
How about George Orwell? How about
Moris Collis? And Professor. Luce and so on! Who has campaigned for
Burma to get freedom? Some Brits!
So race, religion are important but
I prefer her to marry an educated Brit than an uneducated Aung Bu or
Thar Gi. Perhaps you are the son of
Aung Bu whose father worked asahired thug for elected MP in 50s,
who himself worked asaMaSaLa sucker in 70s and 80s and now you
as an uneducated bum working an
internet blogger troll. How much
do you makeaday insulting my leader? I am sick of suckers like you.
You see? You have many supporters like အောင်စင်္ကြာ . He is willing to give you one way ticket to Ygn if you wish to go but I am not sure to you alone or with family? But don't worry for return ticket. If you really go back by အောင်စင်္ကြာ 's one way ticket, many donors/sponsors will give you return ticket. Be brave !!!
Be brave ဆိုတဲ့ အပေါ်က ကွန်မန်. ကိုဖတ်ပြီးရယ်မိပါတယ် ၊ အဲဒါ့နဲ.ဆက်စပ်ပြီး အိမ်ကခလေးတွေအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့ Bananas in pyjamas ထဲက B1 နှင့် B2 အကြံတူလို. အမြဲတမ်းပြောလေ့ ရှိတဲ့စကားကို သတိရမိပါတယ် ၊
"Are you thinking what I'm thinking, B1?" "I think I am, B2!".
ကိုပေါပြန်မယ်ဆိုရင် Taxi fare လည်း ပေးစရာမလိုပါတဲ့ ၊ ကားပြာကြီးကလည်း အဆင့်သင့်ပါတဲ့ ၊
ရယ်စရာအနေနဲ. မန့် သွားတယ်လို.ပဲ ယူဆပါ ၊
What did you mean ကားပြာကြီး ? NTUC comfort taxi that scrapped/exported from Singapore last2decadea ago? He don't like all Singapore things although he can't leave from Singapore. :)
Please arrange from Myanamr Industrial Zone product's car for patriotic Ko Paw.
ရယ်စရာအနေနဲ. မန့် သွားတယ်လို.ပဲ ယူဆပါ ၊ :)
pyaw pyaw par par pop.
အပေါ်က တစ်ယောက်ကလည်း သိသိကြီးနဲ. မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးနေတော့လည်း ဒဲးဒိုးကြီးပဲရေးရတော့မှာပေါ့
ကျွန်တော် ၁၀ တန်းတုန်းက ကျူရှင်တက်တဲ့ အခါ ဆရာလုပ်သူက တစ်ခါတစ်လေ နိုင်ငံရေးနဲ.ပတ်သက်လို. အစိုးရကိုဝေဖန် ပါတယ် ၊
အဲဒါကို ကျောင်းသားတွေက " ဆရာရေ အောက်မှာ ကားပြာကြီး (အချုပ်ကား) စောင့်နေတယ် " ဆိုပြီး ၀ိုင်းအော်ကြပါတယ် ၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးခြင်းမဟုတ်ပါ ၊ နိုင်ငံရေးဘလော့ဂါနှင့် နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောသော ကျူရှင်ဆရာ တို. အဖြစ်ချင်းတူနေ၍ ရယ်စရာအနေနဲ.သာ မန်.သွားချင်ဖြစ်ပါတယ် ၊
ကိုပေါ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ....
(Spam ကွန်မင့်တွေကို ဖျက်ရင်း မတော်တဆ မှားဖျက်မိသည့်အတွက်)....
Ngaman has leftanew comment on your post "စားဖားကြီးများ သတိထား":
I agree that u should review ur bench mark to ban in some exceeded kind of comment, we agree n accept debate in line of reasonable ideologies with individual view but shouldn't be tremendous disturb to blog readers. Now some comments on ur blogs are causing people disappointment.
လူတိုင်းဟာ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ိရိယ မတူကြဘူးပေါ့၊
နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလေးစား ချစ်ခင် ယုံကြည်သလောက် အထိတော့ ဘယ်သူကိုမှ မလေးစားတာလဲ ပါမှာဘဲ။ ဘာကြောင့်ဘဲလာလာ အားပေးရမှာပါ၊ အရင်က ဟိုဖက်ပါနေတဲ့သူတွေတောင် စိတ်ပြောင်းပြီး ဒီဖက်ရောက်လာရင် ကြိုဆို ရမှာဘဲလေ။ လုံးဝမလာတဲ့သူတွေထက်တော့ အများကြီး သာတာပေါ့။ ကျနော်တို့တာဝန်က လုပ်နေတဲ့ သူ ပိုလုပ်ချင်လာအောင်၊ မလုပ်သေးတဲ့ သူ လုပ်ချင်လာအောင် စည်းရုံးဆွဲဆောင်တာက ပိုကောင်း မလားလို့ပါ။ လာနေတဲ့သူတွေကိုတော့ သတိထားဆက်ဆံရုံက လွဲပြီး မသေချာသေးခင် ဘာမျှ မပြောစေချင်သေးဘူး။
နိုင်ငံရေးကို အမြင် ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ လှေနံဒါးထစ် ပြောလို့ တွက်လို့ မရပါဘူး၊ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ စေတနာ ထားပြီး တွေးခေါ် ပြောဆို ပြုလုပ် ပါမှ အမှန်ကိုရောက် မှာပါ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ချမ်းသာစေ ချင်ရင် တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေ လုပ်သလိုလုပ်ရမှာပါဘဲ။ မွဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ ပေါင်းနေရင်တော့ မွဲတွင်းထဲဘဲနေရမှာဘဲ ဆိုတာလောက်တော့ ကိုဇော်မျိုး မြင်နိုင်လောက်ကောင်း မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
၈၈ အသုံးအနှူံးနဲ့ပြော၇င် လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာနေပြီး
တိုင်းပြည်ချစ်တာအော်ပြတာလူတိုင်းတတ်တယ်ငပေါ...မင်းလိုမအော်လို့မချစ်ဘူးလို့ပြော၇အောင် မင်းမိသားစုထဲက ဘယ်နှစ်ယောက်ထောင်ကျဘူးလဲ။ အလကားအာချောင်နေတယ်။